ဆီးမထိန်းနိုင်ဆက်ဆံဖို့5အလေ့အထများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - ဆီးမထိန်းနိုင်ဆက်ဆံဖို့ "5 အလေ့အထများ
ဆီးမထိန်းနိုင်ဆက်ဆံဖို့5အလေ့အထများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
urinary incontinence ဝမ်းမဆီးတစ်ခုအတင်းအဓမ္မအရှုံးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာအရှုံးဆီးအိမ်လုံးဝ empties သည့်အခါဆီးယိုစိမ့်နည်း, ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့အခါ, ပျော့စေနိုင်ပါတယ်။
urinary incontinence ဝမ်းမကိုယ်တိုင်ကအတွက်ရောဂါမဟုတ်ဘဲတစ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးမထိန်းနိုင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအများအပြားအကြောင်းတရားများရှိပါသည်။
ဆီးယိုစိမ့်ရုတ်တရက်ဖြစ်နိုင်ပြီးသည့်အခါလူနာ၏ချောင်းဆိုးဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး, နှာချေသို့မဟုတ်ယင်း၏အင်အားလျှောက်ထား။ တချို့ကလူနာကဒီလက္ခဏာတစ်ခုပြင်းထန်ပုံစံဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဆန္ဒအရေးတကြီးဖြစ်သကဲ့သို့ပင်အိမ်သာရောက်ရှိရန်အချိန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကုသမှုကဒီလက္ခဏာများ၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသော်လည်း, တချို့အခြေခံဆောင်ရွက်မှုများကြောင့်ထိန်းချုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးလူနာဆီးမထိန်းနိုင်ဆက်ဆံဖို့အောက်ပါအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောအလေ့အထများကိုလေ့ကငျြ့နိုငျသညျ။ သူတို့ကအရေအတွက်ငါးခုရှိပါတယ်။
1 ။ သင့်ရဲ့စားသောက်မှုအလေ့အထများကိုပြောင်းလဲ
ကျွန်တော်တို့အတော်များများအောက်ပါအချက်ကိုလျစ်လျူရှု: ထိုကဲ့သို့သောစပ်အစားအစာများအဖြစ်အချို့သောအစားအစာများ၏စားသုံးမှုသို့မဟုတ် ချိုသော ဆီးသွားခြင်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အတော်များများကနာကျင်ကျိန်းစပ်အစားအစာများထို့ကြောင့်ဒီပြည်နယ်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်: anti-inflammatory အစားအသောက်များတွင်၏ 11 သော့ချက်
2 ။ မိမိအဆီးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်
၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စည်ပေါင်း ဆီးသွားခြင်းအတွက်အသုံးပြုကြွက်သားအားကောင်းလာစေရန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းစနစ်များပါဝင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာဆီးအိမ်သွန်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နာရီတည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းအိမ်သာသွားရောက်လည်ပတ်အချိန်စာရင်းထိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစံပြခန္ဓာကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နာရီမှာဆီးစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖို့အသုံးပြုရရှိသည်တိုင်အောင်, တတ်နိုင်သမျှဆီးဖို့တိုက်တွန်းကိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲလေးနာရီကြားကာလမှ, တဖြည်းဖြည်းတိုင်းနာရီသည်နှစ်နာရီထိုသို့ပြုမှမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ဆီးကိုင်ဖို့စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်နိုင်သောအခြားရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ဒီနည်းပညာဆီးဖို့ခိုင်မာတဲ့တတ်ပြီးခံစားခဲ့ရသောအခါအနည်းငယ်ဆီးသွားခြင်းနှောင့်နှေးပါဝငျသညျ။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ဆီးအိမ်၏ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုအချိန်အထိ ... ထို့နောက်ဆယ်မိနစ်, ငါးမိနစ်အဘို့အဆီးမှသူ၏ခိုင်ခံ့သောလိုအပ်ချက်ကိုမှတ်မိရပါမည်။
3 ။ ယင်းတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
အကောင်းဆုံးလူသိများသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများမှာ Kegel လေ့ကျင့်ခန်း. သင်သည်သင်၏အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ကနေနေ့တိုင်းသူတို့ကိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာစာချုပ်နှင့်ငါးသို့မဟုတ်တစ်ဆယ်စက္ကန့်များအတွက်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားအပန်းဖြေ။ ထိုအခါတူညီသောကြာချိန်အဘို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ အဆိုပါတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားသငျသညျဆီးသွားခြင်းအလယ်၌ဆီး၏စီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ဖို့အသုံးပြုတဲ့သူများဖြစ်ကြ၏။ သင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသေချာမသိကြလျှင်, သင်အိမ်သာအသုံးပြုတဲ့အခါဆီး၏စီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောအင်တုံ၏ bridge သို့မဟုတ်မြင့်ကဲ့သို့သောအခြားလေ့ကျင့်ခန်းကြီးမြတ်အကူအညီနဲ့၏နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသို့ရာတွင်မှန်ကန်သောကြွက်သားကျုံ့သေချာသင့်ပါတယ်။
4 ။ ဆေးလိပ်သောက်ရှောင်ကြဉ်ပါ
စားသုံး ဆေးရွက် ဆီးအိမ်၏အာရုံကြော function ကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်ပါ။ ကြောင့်ဆေးရွက်ကြီး၏အဆိပ်အစိတ်အပိုင်းများမြင့်မားဖို့, ဆေးလိပ်သောက်သည့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားအားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အထူး နီကိုတင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆီးမှရုတ်တရက်နှင့်အရေးပေါ်လိုအပ်နေမှုလတံ့သော, အလွန်အကျွံဆီးအိမ်ကျုံ့စေနိုင်ပါတယ်.
ထို့အပွငျကဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုဆီးယိုစိမ့်အားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းပြဿနာ, ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ဟုစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဆီးအိမ်နှင့် urethra ၏လျှော့ချထုတ်လုပ်ထားတဲ့သည်, တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်တိုးအပေါ်ဝမ်းဗိုက်ဖိအားချောင်းဆိုးတဲ့အခါ။
5 ။ အရက်ကိုတက် Give
အရက်သောက်ဆီးသွားခြင်းအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ကဆီးကျေးရွာအုပ်စု၏နံရံအားနည်းစေ။ အလွန်အကျွံအရက်သောက်သုံးအနီးကပ်ဆီးအိမ်, urethra နှင့်ကျောက်ကပ်၏နံရံများ၏အားနည်းဆက်စပ်နေပါတယ်။
အရက်ဆီးအိမ် overstimulated နှင့်ဆီးကိုင်နိုင်စွမ်းမှေးမှိန်။ ထို့အပြင်ကာလဖြစ်ပါသည်အဖြစ်, အရက်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေUTIs.
ဆီးစဉ်အပူလောင်ဝေဒနာတွေမှ5သဘာဝကကုစား
ယင်း၏ alkaline များအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, မုန့်ဖုတ်ဘက်တီးရီးယားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဆီးစဉ်အပူလောင်ဝေဒနာတွေကူညီပေးသည်။ Read more »